Global Voices teny Malagasy » In-22 izay no nahanika ny tendrombohitra Everest i Kami Rita avy ao Nepal, zavabita tsara indrindra izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Mey 2018 4:42 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fanatanjahantena, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tsidika
Nahatratra ny tampon'ny tendrombohitra Everest, tendro ambony indrindra eto ambonin'ny tany, fanindroapolo roa amby  (na roa amby roapolo) ny Sherpa mpitari-dia an-tendrombohitra Kami Rita Sherpa , ka voasongony daholo i Apa Sherpa sy i Furba Tashi Sherpa izay samy nahavita izany in-21 avy. Zavabita tsara indrindra manerantany izany.
Nanomboka ny fianihany nanatratra ny tampony niaraka tamin'ireo Shinoa mpianika tendrombohitra miisa sivy ny mpitari-dia menavazana Kami Rita tamin'ny alin'ny talata 15 mey 2018 ary nahatratra ny tendro  tamin'ny alatsinainy maraina 16 mey.
Nanambara  ny zavabitany tsara indrindra manerantany ny orinasam-pitetezantany Everest Seven Summit Treks  izay iasany amin'ny maha-Sherpa mpitari-dia azy:
Sherpa  no anaran'ny vondrom-poko Tibetana izay teratany amin'ny ankamaroan'ireo faritra be tendrombohitra ao Nepal sady manantalenta sy za-draharaha amin'ny fianihana. Saingy lasa voambolana fampiasan'ireo tsi-Nepali anondrona ireo mpitari-dia na mpitondra entana miasa amin'ny faritry ny tendrombohitra Everest izany.
Ny asan'ny Sherpa mpitari-dia  dia ahitana ny fikarakarana ny lalana ho arahin'ny mpianika, mametraka ny tady eny amin'ny toerana, ary mitondra ny fitaovana ilaina hianihana ny tendrombohitra. Asa mampidi-doza izany, saingy ahazoana hatramin'ny 6000 dolara amerikana ao anatin'ny taom-pizahantany iray, ambony lavitra noho ny salan-karama ankapobeny ao Nepal. Nataon'ny governemanta ho tsy maintsy atao n'ny vahiny mpianika tendrombohitra ny manakarama mpitari-dia.
Avy amin'ny vahoaka Sherpa izay monina avy ao an-tanànan'i Thame ao amin'ny distrikan'i Solukhumbu i Kami Rita. Tamin'ny taona 1994 izy no nianika voalohany an'i Everest, ary raha indray mandeha eo amin'ny fiainana ho an'ireo mpianika tendrombohitra sy mamon'ny adrenaline ny fianihana ny tendro ambony indrindra eto ambonin'ny tany , dia efa karazam-pomba fanaony isan-taona izany.
Efa ela izy no niasa amin'ny maha-matihanina azy eo amin'ny fitarihan-dia ho an'ireo mpianika tendrombohitra ao amin'ny Alpine Ascents International, orinasam-pitarihan-dia ara-barotra iray manana foibe ao Seattle. Vao haingana izy no nanatevin-daharana  ny Seven Summits Treks, iray amin'ireo orinasa nepaley ampolony miasa mahazatra ao Everest.
Efa nianihany avokoa ny ankamaroan'ny tendro mihoatra ny 8000 metatra  ao amin'ny tandavan-tendrombohitra Himalaya, anisan'izany ny K2, Cho-oyu, Lhoste ary Annapurna, ankoatra ny hafa.
Tsy i Kami Rita irery no Nepaley hita lohatenin-gazety. Nahanika fanintsiviny ihany koa ny mpiray tanindrazana aminy Lhakpa Sherpa , vehivavy nahavita izany betsaka indrindra teto ambonin'ny tany, ary nanamontsana ihany koa ny zavabitany tsara indrindra teo aloha.
Ny mpianika hafa malazan'ny taona 2018 aloha hatramin'izaodia ilay Aostraliana Steve Plain izay nahatratra ny tendrony impito tao anatin'ny 117 andro  sy ilay Shinoa Xia Boyu efa notapahina ny tongony anankiroa .
Na izany aza, tsy tian'i Kami Rita ny zanany hanaraka ny diany ho ho Sherpa mpitari-dia, noho ireo voina maromaro nitranga teny an-tendrombohitra tao anatin'ny taona vitsivitsy izao. Maro tamin'ireo maty tamin'ny fihontsahan'ny ranomandry tamin'ny taona 2014 sy 2015 taoamin'ny tendrombohitra Everest  nompitari-dia tao an-toerana sy mpitondra entana, ary nisy Sherpas tamin'izany.
Olona mihoatra ny 4000 no nahatratra ny tendron'i Everest  mihoatra ny im-7000. Ary isan-taona, manintona olona an-jatony hifanamby amin'ny tenany hitsapa ny fetra farany vitany ilay tendrombohitra mandondona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/17/119588/
 fanindroapolo roa amby: https://thehimalayantimes.com/nepal/kami-rita-sherpa-scales-mt-everest-record-22-times/
 asan'ny Sherpa mpitari-dia: http://www.bbc.co.uk/newsround/27130467
 ho tsy maintsy atao: http://www.dpa-international.com/topic/sherpa-mountain-guide-eyes-record-breaking-22nd-everest-180512-99-275021
 fianihana ny tendro ambony indrindra eto ambonin'ny tany: https://globalvoices.org/2016/02/14/following-a-summit-less-2015-this-year-will-see-record-attempts-to-reach-the-peak-of-everest/
 Lhakpa Sherpa: http://english.onlinekhabar.com/two-nepali-sherpas-break-their-own-world-records-on-everest.html
 ny tendrony impito tao anatin'ny 117 andro: https://phys.org/news/2018-05-australian-world-everest-summit.html
 Shinoa Xia Boyu efa notapahina ny tongony anankiroa: https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/chinese-double-amputee-conquers-everest-on-fifth-attempt
 tamin'ny fihontsahan'ny ranomandry tamin'ny taona 2014 sy 2015 taoamin'ny tendrombohitra Everest: https://www.worldatlas.com/articles/the-deadliest-disasters-on-mount-everest.html
 nahatratra ny tendron'i Everest: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mount_Everest_summiters_by_number_of_times_to_the_summit